बाडुल्की किन लाग्छ ? यस्तो छ, बाडुल्की लाग्नुको रहस्य - ramechhapkhabar.com
बाडुल्की किन लाग्छ ? यस्तो छ, बाडुल्की लाग्नुको रहस्य
हामीलाई कहिले काँही बाडुल्की लाग्यो भने हामी हाम्रा आफन्त वा आफुलाई मन पराउने मान्छेले सम्झियो भन्छौँ । तर यसको वैज्ञानिक कारण त्यसो नभई अरु नै भएको कुरा बुझ्न जरुरी छ । के हो त बाडुल्की लाग्नुको वैज्ञानिक कारण ? आउनुहोस् यो विषयमा कुरा गरौँ । बाडुलीले हाम्रो जीवनमा कुनै कारण र महत्व राख्दैन । बाडुली सामान्यतया केही मिनेट रहन्छ र पछि आफैं ठीक पनि हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ निक्कै बेरसम्म पनि लागिरहन सक्छ । केही गरी हामीलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म बाडुली लागिरह्यो भने त्यसो हुनुमा केही गम्भीर कारणहरु पनि हुन सक्छन् र हामीले तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्दछ ।
बाडुल्की आउनु एक सामान्य समस्या हो । हाम्रो पेट र फोक्सोलाई छुट्याउने एउटा पातलो झिल्लीलाई डायफ्रम (Diaphragm) भनिन्छ । हाम्रो फोक्सोलाई खुम्चने र फुक्ने कार्यमा यसले सहयोग पुर्याउछ । बाडुल्की लाग्नुको पछि वैज्ञानिक कारण अनुसार हाम्रो शरीरमा डायफ्राम खुम्चिनु हो । खासमा हाम्रो मांशपेशी खुम्चिएपछि हाम्रो स्वास नलीलाई बन्द गरिदिंदा हिक-हिक आवाज आउँछ । यो अवस्थालाई नेपाली भाषामा ‘बाडुली लागेको’ भनिन्छ । यसै डायफ्रागममा श्वास लिने प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको अवरोध वा उत्तेजना आयो भने हामीलाई बाडुल्की लाग्छ । विशेष गरेर फोक्सो र पेट सित सिधा सम्पर्क भएकोले फोक्सो र पेटमा कुनै गडबडी भयो भने ड्रायफगममा असर परी बाडुल्की लाग्ने गर्दछ ।
सामान्यतया छिटो-छिटो खाँदा, तातो खानासँग चिसो पेय पदार्थहरु लिंदा, धेरै पिरो वा मसलादार खानेकुराहरु खाँदा, जोडले हाँस्दा र जाँडरक्सी धेरै पिउँदा बाडुल्की लाग्ने गर्छ । कुनै कुनै अवस्थामा शारीरिक रोगको कारणबाट पनि हामीलाई बाडुल्की लाग्न सक्छ । तर ट्युमर वा मिर्गौलाका केही रोगहरु लाग्दा समेत हामीलाई बाडुल्की लाग्न सक्छ । यो केहि समय पछि आफै निको हुन्छ । तर लामो समयसम्म पनि निको भएन भने कुनै अर्को कारणबाट भएको ठानी चिकित्सकलाई देखाउनु बुद्धिमानी मानिन्छ ।
बाडुली किन लाग्छ ? यसको जवाफ अझै वैज्ञानिकहरुले किटेर भन्न सकेका छैनन् । त्यसो त, प्राचीन कालमा सबै प्राणी र मानिससमेत पानीबाट विकसित भएर जमिनमा आएको र त्यसबेला गिलले सास फेर्नुपर्ने प्राकृतिक नियमको अवशेषको रुपमा बाडुली रहेको मान्नेहरु पनि वैज्ञानिक जगतमा छन् । विशेष गरि फ्रान्सका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार बाडुली लाग्नुको रहस्य हाम्रो जीव विकाशक्रमको कुरासँग जोडिएको छ र यसले के संकेत गर्छ भने मानिसको प्राचीन पुर्खा पनि कुनै बेला समुद्रबाटै उत्पति भएको जीवबाट विकास भएको हो । त्यसैले उनीहरुको विश्वास अनुसार बाडुली भनेको तिनै समुद्रमा बस्ने जीवको अवशेष हो ।
जुन बेला उनीहरु फोक्सोको माध्यमबाट नभई फुल्काको माध्यमबाट सास फेर्ने गर्थे । पछिल्लो समय पेरिसको अस्पतालमा क्रिस्चियन स्ट्राउसको नेतृत्वमा रहेका वैज्ञानिहरुको एक टोलीले गरेको दाबी अनुसार बाडुलीकै जस्तो प्रक्रियाले पानीमा बस्ने र फुल्काको मद्दतले सास फेर्ने जीवहरुको फुल्काको प्वाललाई खोल्ने र बन्द गर्ने क्रियालाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । बाडुली लाग्दैमा शरीरलाई खासै फाइदा पनि हुँदैन र सामान्यता अप्ठेरो हुनुको अलावा अरु कुनै नोक्सान पनि गर्दैन । यही कारणले गर्दा बाडुली किन लाग्छ भन्ने कुराले वैज्ञानिकहरुलाई नै अन्यौलमा पारेको छ । यसबारे अझै अनुसन्धान जारी नै छ ।